Faaiidada Sinjibiishu U Leedahay Dhiig Karta - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA CAAFIMAADKA Faaiidada Sinjibiishu u leedahay dhiig karta
Faaiidada Sinjibiishu u leedahay dhiig karta
Sinijibisha ayaa la cadeeyay inay dawo aad u wanaagsan tahay, waxaana la sheegay inay ku badan tahay maadada Gengirol oo ah tan ka qayb qaadata habsami u socodka dhiiga iyo inuu noqdo mid si fiican u dhex mara xidida. Waxaana ay warbixntu intaasi ku dartay inay Sinjibiishu kor u qaado saafinimada dhiiga iyo marinada dhiigu maro oo ay ka ilaaliso inay awdmaan.
Walaxda Gengirol waxa kale oo ay caawisa in Dhiigu si aan xayiraad lahayn u socdo isaga oo xambaarsan Ogsajiin ku filan, Nafaqooyin iyo waxyaalaha kale ee daruuriga u ah Jirkeena, isagoo gaadhsiinaya unugyadu Jidhkeenu ka kooban yahay.
Sinjibiishu waxay kaloo u dawo u tahay Dadka ku dawakha Safarada, Xanuunka ku dhaca Ciridka, Nabarada, kabuubyada Xubnaha jidhka laga dareemo. Noocyo tiro badan oo Bakteria ah waa dawada ugu wanaagsan.
Sinjibiishu waxay dejisaa Maskaxda, cadaadiska Dhiiga oo ay hoos u dhigto, Apiete-ka oo ay Qofka u furto, fududaynta Dheefshiidka, ka hortaga Mataga iyo xanuunada yalaalugada, Xabka oo ay ka soo goyso dadka qufacaya iyo weliba iyadoo wax weyn u tarta Dadka aan ceshan Karin kaadida. (British Medical Journal )
Previous articleMasiibada Sharciyada Khariban
Next articleCayayaanka Marka Ay Dhintaan Is Aasa Sida Bila Adaamka Cilmi Baadhis Cusub